Euroatlas: Khariidadaha hore ee qaabka shp - Geofumadas
Janaayo, 2010 Cartografia, tabo cusub
Waxay ku dhacdaa khariidada khariidadda, in dukaanka cuntada aan soo iibsano oo kaliya in la keeno khariidad khafiif ah ama aalad ah oo lagu daro ururinta wixii aan hore u haysanay. Ansixinta ayaa waxay ku dadaalayeen inay muujiyaan khariidadaha Flash-ka ah ee casriga ah ama horumarinta nidaamka nidaamka xogta juqraafiyeed, laakiin qaabka vector-ka waxaan ku aragnaa kaliya barnaamijyada sawir gacmeedyada.
Waa maxay Euroatlas wax qabad ah? Ilaa iyo intaan ka hor, waxa uu daabacnaa daabacado la daabacay oo si wanaagsan loo faahfaahiyay, hadda waxay kor u qaadayaan khariidadaha soo celiya taageerada qaabka vector oo leh olole ballaadhan:
"samee aalad taariikheedkaaga ah oo leh taariikhda GIS taariikhda"
Aan aragno waxa aan ka tagnay ka hor inta aan la seexin:
Khariidadaha GIS. Haddii ay ku saabsan tahay atlas taariikheed, qadiimiga ah iyo tixraac Euroatlas waxay ku filan tahay, laakiin waxa iga soo baxa waa in aad ka heli kartid qaybaha vector qaabka qaabka qaababka loo isticmaalo barnaamijyada GIS. Iyaga, maadaama aysan ahayn giseros oo kaliya waxay ku sheegaan ArcGIS, Open Jump iyo Map Windows, laakiin sida iska cad qaabkaan qaabka ayaa hadda lagu aqoonsaday barnaamijka CAD iyo barnaamijka GIS. Waxay yimaadaan:
pdf oo leh sharaxaad ka mid ah layers
prj oo ka mid ah lakabyada iyo saadaalinta
iyo shp-ga, dbf iyo shx.
Ka mid ah khariidadaha xaaladaha GIS waxaa jira (hadda) khariidado taariikheed ah mid kasta oo ka mid ah qarniyadii 20 Waxay na hor keenaan qiimaha laga bilaabo 30 Euros. Dabcan waa inaad ka hubsataa liisanka isticmaalka ujeedooyinka copyrightka haddii aad rabto inaad daabacdo shey cusub.
Haddii ay dhacdo in Corel (Cdr) ama Illustrator (ai) ay horey u soo galaan layers. Halkan waa dhamaystiran map of Europe 2009 iyo kuwa Rome hore
Dejinta Webka Mid ka mid ah dhinacyada xiisaha leh, waa in khariidado badan loo arki karaa internetka, si loo dhiirigeliyo iibsashada. Arag kiiska Rome hore, toddobo buurood oo asal ah (Septimontium), Rome ee qarnigii koobaad iyo muusikada oo ka dhigaysa mid sahlan in la arko faahfaahinta ... succulent! iyo in Corel Draw.
Aad u xiiso badan, ujeedooyin waxbarasho iyo safar aad u faa'iido leh. Waxaan ku talin lahaa iyaga.
Post Previous«Previous CAD, GIS, ama labadaba?
Post Next Fiican, xun iyo fool xun oo ka yar hal maalinNext »